Xukuumadda Somaliland oo galalaftay Madal lagu caleemo saarayay Suldaan Cusub |
Xukuumadda Somaliland oo galalaftay Madal lagu caleemo saarayay Suldaan Cusub
Hargeisa( GNN):- Xukuumada Somaliland ayaa albaabada u laabtay madal lagu caleemo saarayay Suldaan Cusub oo reer Hargeysa ah. Waxana wararka naga soo gaadhaya Magaalada Hargeysa ay sheegayaan in Xaflaasi oo ka socotay Xaafadda Magaalo Jimcaale oo ku taala cidhifka woqooyi bari ee Magaalada Hargeysa ay gabi ahaanba ciidamadu joojiyeen, dadkiina ka dareeriyeen halkaasi. Tallaabadan ay ciidanku qaadeen ayaa ah amar ka soo baxay Wasaaradda Daakhiliga Somaliland. Sidoo kale Telefishanada iyo dhammaan Xarumaha Saxaafadda ayaa iyagana amar lagu siiyey inaan Xaflaasi la baahin Karin.
Todobaad ka hor ayay ahayd markii Alle ha u naxariistee uu Hargeysa ku geeriyooday Suldaan Ismaaciil Aden Xirsi (Suldaan Baxar) oo ahaa suldaanka guud ee beesha deegaanka Woqooyiga Hargeysa ee Geedeeble (Bahgobo) hasa yeeshee, ilaa imika odayaashu ma soo saarin cidda loo caleemo saari doono jagada uu ka baxay marxuum Suldaan Baxar, waxana wali socota Tacsidii loo fadhiyey Marxuumka geeriyooday.
Dhammaan odayaasha Beesha uu Marxuumku ka baxay ayaa saaka tagay Wasaaradda arimaha gudaha oo ay hoos tagaan guud ahaanba odayaasha dhaqanku, waxayna ku wargeliyeen inaanay waxba kala socon Xafladda la sheegayo in lagu caleemo saarayo Jimcaale Maxamed Ciise oo isagu isku diyaarinaya inuu jagadaasi buuxiyo. taasi darteed, ayay wasaaradu ku dhaqaaqday tallaabadaasi ay Xafalada ku joojinayso.
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Hargeysa, waxay sheegayaan in Xukuumaddu ay halkaasi gaysay ciidamo aad u tiro badan isla markii ay Xaflaasi bilaabantay, iyagoo dadkii goobta ku sugnaa kala dareeriyey isla markaana joojiyey Xafalaasi. Waxaanay ciidanku ku raad joogaan siday u soo qaban lahaayeen jimcaale Maxamed Ciise oo goobta ka baxsaday, markuu ka war helay inay ciidan ku soo socdo.